Ụbọchị My Pet » Olee otú iji na-adọta ndị Nwanyị nrọ gị
emelitere ikpeazụ: Jul. 13 2020 | 5 min agụ
M bụ nwaanyị, a nwaanyị, bụ ndị gara na ọtụtụ ụbọchị na ndị ikom, azụ m mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụbọchị. N'ihi ya, m wee hụ a otutu dị iche iche àgwà, echiche na bịara mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. M ga-eso gị n'ime scoop ihe n'ezie na-arụ ọrụ maka ndị ikom na-akpa ndị inyom, na ihe iji zere dị ka ọrịa mgbe ị na-esi n'ebe a ụbọchị ma ọ bụ na-ekwurịta okwu na nwaanyị.
Jide n'aka na ị Mee a Ndọrọ Hà
Romance ya – Anyị inyom na-dọtara a nwoke site mmetụta ejikọrọ, nke a bụ obere dị iche iche si otú ọ na-arụ ọrụ ọtụtụ ndị ikom m na. Ya mere, anyị nwere ike izute nwoke na-adịghị na-eche mgbe niile dọtara, Otú ọ dị mgbe anọkọ na ya, o nwere ike merie anyị, anyị kpam kpam ada maka ya. Nke a na-eme mgbe nile. Ya mere iji nke a. Romance ya. Echegbula onwe gị banyere yiri ochie gaferela – Amaghị m nke a otu nwaanyị ndị na-agaghị na-eche ịtụnanya mgbe nwoke na-elekọta na-ihunanya ya na ya. Ọ ga-achọpụta na imekwu mgbalị ị na-aga, okooko osisi, Anam Udeme azụ ya oche, na-ụzọ na na. Ọbụna ma ọ bụrụ na isi ya o kweere na ọ ga-ochie gaferela, n'ime obi ya na ọ ga-dị nnọọ agbazekwa, na na na-ebe ọ dị mkpa ka ị na-nwere mmetụta!
Dọhọ iji kwụọ ụgwọ - Nke a n'ezie ekedo na n'elu. Ihe ọ bụla ikowe-acha ọkụ i nwere banyere ịtụ m atụ aro ka ị dobe ha na ụkwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka a mmetụta ọma. Chọrọ mara mere? Gụọ m isiokwu banyere onye ga-akwụ ụgwọ na mbụ ụbọchị.
Otito ya (ma ọ bụghị nke ukwuu) - A obere, ezi otito na-aga a nnọọ ogologo ụzọ na-eme ka a nwaanyị-eche ihe ọma, na ike-agbazekwa ọbụna coldest obi. Otú ọ dị lezie anya nke n'elu-eme ya. Ị nwere ike Mgbeeke n'uko ọ bụrụ na ọ okwu ọzọ nke dị n'ọnụ gị bụ a otito.
Jiri fun agbaji ice - Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nwere ike ịbụ a-egosi ahụmahụ ebe ị na-mara ya otú agbaji ice site na-eme atụmatụ ihe aka na na fun, kama erughị ala jupụtara mmanya ụbọchị ma ọ bụ nri abalị nke nwere ike si ihe dị ka a ọrụ ọnụ! Gaa ebe a: pụrụ iche mkpakọrịta nwoke na nwaanyị echiche maka ụfọdụ oké echiche ma na-agụ ebe a: atụmatụ ihe mbụ ịtụnanya ụbọchị chọpụta otú e si wuo njikọ.
Mee erughị ala - Erughị ala ụlọ ahụ ma na-enwe mmekọahụ escalation na-agbalị na-anwale usoro na ogologo e ji ndị mmadụ na-amụba mma na nwaanyị ha na-amasị. Nke a apụtaghị na ị na-aghọ a mmekọahụ pesti, Otú ọ dị a bit nke fun, igwuri egwu flirting pụrụ n'ezie na-ekpo ọkụ ihe elu. Njakịrị bụ ọzọ dị ukwuu ụzọ iwu mmekọahụ onwu dị ka ogologo oge ka ọ bụghị overdone. Mgbe m dere na a Ihọd onye na-eji nke a dị ka ya isi n'ụzọ na-emekọ ihe a nwaanyị. Na mbụ, ọ bụ fun, ma mgbe otu awa ma ọ bụ abụọ, ọ bụ larịị na-agwụ ike. Ọzọkwa, akụkụ nke erughị ala ụlọ bụ ịnọgide na-enwe na gị onwe gị na ndụ onwe, ọbụna mgbe ị na-ada ada n'ihi nwaanyị.
Izere ndị a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị Mejọọ
N'ịbụ whiney - Ndị mmadụ na-wain ókè banyere ihe ndị dị otú ahụ a Gbanyụọ. Ókè-. M n'aka na unu pụrụ ịkọ ma ọ bụrụ na onye ị maara moans mgbe niile. Ị pụrụ iche na ọ bụghị gị, Otú ọ dị, dị nnọọ elele n'ime na. Mgbe ụfọdụ, anyị ákwá na wain enweghị ọbụna ifiọkde ya. Na-amasị gị mkpesa gị na di na nwunye? Ị ákwá banyere: ihu igwe ahụ, ọrụ gị, ala nke aku na uba, ndị inyom ị ụbọchị? Ohere na-ọ bụrụ na ị na-eme ya na ndị enyi gị mgbe ahụ ị na-eme ya mgbe ị na-akpa, na o nwere ike kpọrọ itinye nwanyị anya. Bụrụnụ ndị na-adịghị ihe ị na-ekwu okwu banyere gị na ụbọchị, na asụsụ ị na-eji.
Igosi isi nchebe - OK otú anyị niile nwere ụfọdụ obi erughị ala, m na-agaghị otu maka bottling elu mmetụta, Otú ọ dị a mbụ na ụbọchị bụ bụghị ebe ikuku gị nchebe banyere ma ị bụ mara mma ndị na-abụghị mmekọahụ, n'ihi na m na obi sie gị na ị ga-abụ ma ọ bụrụ na ị na-eme! The iberibe nwaanyị nwere ike ịhụ ya na-adọrọ mmasị Otú ọ dị nke a ga-a akwa nta. N'ihi na ọtụtụ ndị inyom a ga-anyị na-agba ọsọ oyi. Mgbe m dere na a Ihọd onye malitere ịjụ m ma m chere na ọ bụ mara mma na mbụ ụbọchị, na otú o mere gosiri na m na ọ na-abịa site n'ebe nke anọghị. Ọ gaghị dobe ya. Ọ nọ na-arịọ m ka m, ka m chọta ya mara mma? Ma mgbe ahụ, ọ malitere ikwu na e nweghị ebe mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ma ọ bụrụ na ahụghị m ya mara mma o wee ezi na-akpa ọchị banyere ya. The eziokwu na m ka na-eme ka m n'uche otú m chere (echeta mma na-arụ ọrụ dị iche iche n'ihi na anyị ndị inyom) Otú ọ dị na oge ọ bụla o kwuru ọ na m mma gbadara. Ọma o kwuru onwe ya nke na-ọzọ ụbọchị. Na-arụ ọrụ gị okwu na ọgwụ, ma ọ bụ n'ụlọ site onwe gị, bụghị na gị ụbọchị. Ọzọkwa mara - erughị ala na mmetụta uche dị iche iche!
Bitching banyere gị bụbu - Nke a n'ihi na m bụ otu n'ime ndị kasị njọ omempụ na ọ ga-etinye m ka m ezi Ihọd quicker karịa chocolate melts na a na-ekpo ọkụ ụbọchị. Ọ DỊ MMA, Ya mere, gị na ndị bụbu nwere ike ịbụ na ndị kasị b * tch na ụwa dum, ma hapụrụ gị Broken obi na ụmụ ise iji bugote, ma nwaanyị na ị na-akpa na-adịghị maara na ị ma. Ọ bụrụ na ị malite ọjọọ mouthing gị bụbu ọ ga-ikwu ihe gị bụbu karịa gị. Ọzọkwa, ọ ga-enwe nchegbu banyere ikpe ị ga-eme banyere ya. Ịzụlite bụbu n'oge na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ nnọọ ihe ọjọọ na ụdị na kpam kpam-enweghị isi (N'eziokwu m na-eme ezi ikpe n'ihi na ọ bụghị na-eweta bụbu si n'ime mmekọrịta gị mgbe!) Ihe dị mkpa bụ onye ị bụ UGBU A, na nwaanyị n'ihu gị.
Inwe isi ikowe gbasie (ndị a anya dị ka red flags anyị!) - Lee niile n'elu. Ikowe gbasie ike na-agụnye ranting banyere egwu ụbọchị ị nọwo na-na, mkpesa na ọ bụghị na-akpọ gị n'ihi na ọ na-eme ka ị na-eche obi erughị ala, slagging apụ niile ụbọchị ị nọwo na-na, ịkwa ákwá banyere-akwụ ụgwọ wdg. Ọ bụ oge na-etinye gị na nnukwu nwa ogologo ọkpa na. Mgbe ụfọdụ ndụ pụrụ ịhụ ikenenke, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ga-esi n'ihu na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị egwuregwu mgbe ụfọdụ, ị ga-inu ya! Ma i ga-dị nnọọ Stew na gị onwe gị juices. M olileanya na ị na-ahọrọ ga-esi e, idebe ikowe-acha ọkụ na dị nnọọ ụtọ-akpa maka fun, na-ejighị n'aka, na mgbe ụfọdụ crazy ahụmahụ o nwere ike ịbụ.
Na na ọgwụgwụ ...
Echefu niile n'elu na dị nnọọ bụrụ onwe gị! - Ee m n'ezie mere na-ekwu na. Ịmụta na-esonụ anatara nke ụkpụrụ nduzi nwere ike mgbe ụfọdụ ka ị stiif na-ekwekọghị n'okike na gị ụbọchị. Ya mere mgbe ọ bụ oké na-agụ ndụmọdụ na cheta ya n'elu na-ekwe ka ọ na-imi ya, echegbula banyere ihe na-ọ zuru okè. Were niile na-akpa ndụmọdụ dị ka ụkpụrụ na kama onye zuru kwesịrị. Gbalịa ihe maka onwe gị na n'elu ihe nile na-echeta na wetue nwere fun!